Umlando - Shenzhen Feimoshi Technology Limited
Umphathi Wethu ungomunye wabalandeli bokuzilibazisa be-RC.Ngaleso sikhathi, wafunda okwengeziwe ngobuchwepheshe nezinto ezibonakalayo.Lapho ekwazi ukushoda kokuzilibazisa futhi efuna ukudala uhlaka lwamandla olulula noluphakeme.
Wazama izinto eziningi ezingavuthiwe ukuze akwenze.Ekugcineni wanquma ukusebenzisa i-carbon fiber ukuze ayenze ibe yiqiniso.
Inkampani yethu yasungulwa ngo-August 16, 2008. Ngalesi sikhathi, sizibophezele ekucwaningeni ukuthi i-carbon fiber, uhlobo olusha lwezinto ezibonakalayo, ingaqaphela ukuthi amakhasimende afunani.Lokhu bekulokhu kuyizinjongo zethu.Ngezikhathi ezithile, sifunde ukuthi imodeli yekhasimende ingaqedwa ngokusebenzisa i-CNC cutting kanye ne-carbon fiber tube.Kusukela lapho, saqala ukwenza ngokwezifiso imidwebo yekhasimende.
Ngesikhathi esifanayo, siphinde sisayine izivumelwano zobumfihlo namakhasimende, ukuze amakhasimende akwazi ukusikhetha ngokukhululeka.Njengoba abantu abaningi ngokwengeziwe emakethe beqonda impendulo ehlukene yemboni kanye nemikhiqizo esetshenziswa amakhasimende, ithimba lethu lonjiniyela belilokhu licabanga ngendlela yokuxazulula lezi zinkinga, futhi sesiqale imizamo eqhubekayo yemisebenzi yezandla ekhethekile (chamfering, siking, ukufaka, njll).Kusenza sithole impendulo engcono emakethe ye-carbon fiber.
Sep, 2015 kuze kube manje:
Kusukela ngo-September 2015, ukuze siphendule ezidingweni zikahulumeni zokuvikela imvelo, siye sathuthukisa imishini yethu futhi savula ingqopha-mlando entsha embonini yethu ye-carbon fiber.
Ngokuqoqwa kwamakhasimende amaningi ngokwengeziwe, izidingo zamakhasimende zihlala zisungula izinto ezintsha.Senza inqubekelaphambili futhi silandele amakhasimende ethu ukuze sizuze imakethe enkulu.
Sikholelwa ukuthi imakethe ye-carbon fiber izongena kancane kancane ezimpilweni zethu zansuku zonke futhi ibe umkhiqizo wamagama wasekhaya.
Enkampanini yethu, singakwazi ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo ehlukahlukene ye-carbon fiber kumakhasimende, njengefenisha ye-carbon fibre, izinsimbi zomculo ze-carbon fibre, ama-drones, njll.